Kufanele izicathulo yezingane Kuphoqelekile ukuba Thomas isithende, ngoba liyisici esibalulekile, noma ingabe icebo ukumaketha, okuvumela abakhiqizi ukuze kufuthwe intengo imodeli? odokotela Modern bathi izithende enjalo ibalulekile hhayi kuphela ukwenza umuthi, ngoba senzelwe lokuvimbela izifo wamathambo.
Barefoot noma ugqoke izicathulo wamathambo?
Izicathulo, eyenziwe yonke imithetho - oluthembekayo ukwesekwa kokubili izingane kanye unyawo omdala. Kodwa uma umuntu omdala izicathulo wamathambo ithungwe oda noma ukuthola ezitolo ezikhethekile ngokuqinile on kadokotela, ingane onobuhle akhiqizwa, njengoba umthetho, ikhumbula izincomo orthopedists. Lokho Thomas isithende - iyingxenye yabo ebalulekile.
Esikhathini esiyiminyaka kumiswa asebenzayo we unyawo izicathulo wamathambo kunconywa ukugqoka ngaso sonke isikhathi uma uhamba ekhaya. Nokho, lokhu akusho ukuthi kufanele sishiye zihamba engafaké zicathulo. Utshani, amatshe, isihlabathi esithambile - ewusizo kakhulu sokuthuthukisa ebusweni Gait okunempilo kanye zokuvimbela kakhulu izifo of the system zemisipha.
Kanjani i isithende wamathambo Thomas
Kuyini lokhu? Photo ifomu esithendeni evamile nokuba ukunwebeka ohlangothini engaphakathi ematheni isimo, uzonika isithombe esicacile isakhiwo, okuyinto kamuva kuyoba akukwazeki ukuthi lapho ekhetha imodeli izicathulo ngoba umntwana.
Nge ukukhula wosana imilenze yakhe akhawunti i umthwalo okwandisa. yokuchitha isizungu Active, egijima futhi begxuma ukuthuthukisa ke. Indima zakudala isithende - isithende ukwesekwa, ngenkathi isici inketho wamathambo ukuqinisa ngezinyawo futhi awuvikele zavalivanija ngaphakathi. Lokhu kwenziwa Sibonga kungenzeka ukuba ngisho umthwalo ukusatshalaliswa phezu obuphelele lonke ingaphakathi lonyawo.
Noma yimuphi eqinile (ukhonkolo phansi, asphalt, umhlaba) kwenza umuntu axhumane kanzima futhi zilimaze yomgogodla futhi isithende ingane abasha. Thomas isithende ifakwe mfutho ukushaqeka, okwenza kube ukushaqeka obunganakekile ngesikhathi egijima futhi begxuma.
Izici izicathulo wamathambo izingane
nezicathulo Wamathambo kumele bahlangabezane nalezi zidingo ezilandelayo:
isithende high, iqakala uSangweni yena lokuvala buhambisane isikhumba obukhulu noma faka ekhethekile ngokuphephile ulungise isikhundla ezinyaweni nasemaqakaleni;
isithende kufanele kube ezibanzi ezinzile, enwetshiwe ngaphakathi ukuvikela ngezinyawo ngaphakathi zavalivanija (isithende wamathambo Thomas);
ematheni springy futhi nokunwebeka kufanele kube roll yokufakelwa, ukuhlinzeka elungile kumiswa Gait;
ukugcwala anda futhi kuyanda okusezingeni eliphezulu nezicathulo wamathambo, ukwesekwa wamathambo ukusetshenziswa izingxenye ngoba isidleke ngaphakathi izicathulo;
kungekho ezivuzayo ngaphakathi sihloko eyenziwe impahla yemvelo (lesikhumba, Sweden nokunye).
Ukunakekela izinyawo zezingane
Misa umntwana - ukugxila receptor, ngakho ochwepheshe wamathambo unamathisele ukubaluleka okukhulu ingane ukuhamba bengafaké zicathulo, kodwa hhayi endaweni eqinile, engabangela umonakalo, futhi izinto ezithambile athukulule. Ngakho-ke, izicathulo, kokuba Thomas isithende, ngisho kudingekile njengoba inguqulo ekhaya. Kunalokho, utshani, isihlabathi futhi amatshe bushelelezi - panacea for izinyawo flat.
Indlela ingavinjelwa ebusika, lapho umntwana esikhathini esiningi kuba ekamelweni? Ngo kubanda, elincane, namatshe abushelelezi zingafakwa in indishi egcwele amanzi afudumele, bese ukufundisa ingane ukumaka kubo, imilenze ngokuthinta. Ukwenza lokhu nsuku zonke Kunconywa.
Omunye umdlalo ewusizo: ehlakazekile amapensela izinyane kufanele eqoqwe kusukela phansi futhi ubeke emuva ebhokisini ngosizo iminwe izinyawo. fun enjalo kungenziwa ngokusebenzisa izinkinobho ezinobukhulu obuhlukahlukene.
abakhiqizi Phezulu izicathulo wamathambo izingane
Abazali baye bawuthatha ngokungathí sina ezinye izinkampani ezikhiqiza izicathulo zezingane kokuba isithende Thomas. Izibuyekezo kulo bayizinkulungwane umbala omuhle kakhulu. Kususelwa imibono yabazali ukunakekela baye benza uhlu lwamadoda brand ezinakekela imilenze izingane mnene sika. Nazi ezinye zazo:
"Orteke" (Ortek) - umkhiqizi yafuna iningi nezicathulo wamathambo Russia. Ukuthandwa imikhiqizo yabo ngenxa Ukubambisana eduze abadali isihlangu ne odokotela, kuhlanganise edume kunazo eMoscow ucwaningo nezikhungo nasezibhedlela. izitshalo yenkampani zitholakala e-China.
"Totto" - trade mark lenkampani Russian kusukela Petersburg. It inenani elikhulu imali futhi, sibonga ukutholakala kwayo wearability futhi design zanamuhla, abathandwa abathengi.
"Ortho-LAS" (Sursil-Ortho) ukuthuthukisa onobuhle zabo ngenkuthalo edonsela orthopaedists ovelele ezivela eMnyangweni traumatology, amathambo kanye arthrology FPK MR PFUR. Ngezinye izitshalo yenkampani elise Russia, izicathulo zezingane zenziwa kuphela ngezinto zemvelo.
ngezinyawo Wezingane bumba, soft futhi zazivuma. Uma isikhathi ukwenza ukulungiswa zezinkinga, kuya kwezineminyaka eyishumi ingane kungayilungisa cishe kunoma iyiphi zokugula we unyawo. Okubalulekile, musa sekwephuzile futhi uthathe ukunakekela zonke, ngisho ukwephulwa ezicashile.
Indodakazi kaZeyusi - unkulunkulukazi ukufa futhi kushukumisa